Timisoara, toeram-pihaonan’ny kanto ankehitriny vaovao · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 24 Oktobra 2015 8:15 GMT
Vakio amin'ny teny Català, English, Français
Timisoara art encounters (fihaonan'ny kanto ao Timisoara)- Sary avy amin'i Annick Lederle, nahazoan-dalana
*Nahazo alalana avokoa ny sary rehetra ampiasain'ny mpanoratra Annick Lederle.
Tapa-bolana izay, niova ho toera-pampiratiana ankalamanjana ny zava-kanto ankehitriny i Timisoara. Nanomboka ny 3 ka hatramin'ny 31 Oktobra 2015 ity tanandehibe ity no mampiantrano ny andiany voalohany amin'ny “Timisoara Art Encounters” ho fanao isaky ny roa taona.
Ity tetikasa ity dia tena fanamby ao amin'ny renivohitr'i Banat teo aloha, izay sondriana ampolotaonany maro amin'ny fahatsiarovana mahafinaritra ny Ampira Aostro-Hongroà sy ireo sangany ara-kolontsaina maro samihafa. Tao anatin'ny taona maro anefa, nitombo ireo fisantaran'andraikitra ataon'ny tsirairay hamelomana ny fahaiza-mamorona sy ny fiainana ara-kolontsaina miompana amin'ny mpanakanto, mpanoratra sy ny mpampiranty zava-kanto ao an-tanàndehibe.
Amin'ny fampahafantarana ny hetsika fanao isaky ny roa taona andiany voalohany momba ny zava-kanto ankehitriny, hita ihany ny mpampifoha, afaka manaitra ny saina sy mampihetsika ny herimpo. Aleo lazaina avy hatrany, fa nahomby ny fanamby, na tamin'ny kalitao na teo anivon'ny zava-kanto naranty, ary tamin'ny fandraisana anjaran'ireo mpanakato malaza manerantany ( manomboka amin'i Mircea Cantor ao Dan Perjovschi ka hatramin'ireo mpitarika “manatantara”-n'ny hetsika Sigma) sy ny fahatongavan'ireo mpanangona, mpampiranty sy mpitsonga marobe. Tsy maintsy lazaina fa nahavita nampiseho ny fahaiza-manaony ny tanànan'i Timisoara tamin'ity indray mitoraka ity: ny tantarany, efa nolazaina izany, fa eo ihany koa ny toerana misy azy ara-jeografia miorina tsara eo amin'ny fihaonan-dalan'ny atsinanana sy ny andrefana, eo amin'ny fivoarana Eoropeana (Vienne, Berlin, Milan)
Tarihan'ilay mpandraharaha sady mpanangona zavakanto Ovidiu ȘSandor ity fihaonan'ny zavakanto ara-maso, natokana ho an'ny zavakanto fahiny sy ankehitrinin'i Romania ity. Ny lohahevitry ny hetsika dia “Dindo sy Fototra (Apparence et essence)”, araka ny teny mahafinaritra fampiasan'i Brancusi ihany. Namerina ny lalana nodiavina sy ny fandaharam-potoanan'ireo mpanakanto izay, matetika lasa any an-takonana, namolavola ny endriky ny tontolo anatin'ny mpanakanto Romainina hatramin'ny fanatontosana misy ankehitriny ireo mpiahy roa Nathalie Hoyos sy Rainald Schumacher, nalaina tany Berlin sy Vienna, ary manam-pahaizana manokana momba ny famoronana sehatra vaovao ao Eoropa Atsinanana.
Hita vokatr'izany ireo tahirinkevitra mahafinaritra, arisiva bitika, lahatsoratra anatra, fijoroana vavolombelona marefo tamin'ny zavatra nataon'ny mpanakanto ao Timisoara nandritra ny vanim-potoana kaomonista. Tsy ahitana kabary tsara lahatra ao amin'ireo lahatsoratra sy tetikasa ireo, mandona ny saina ny fandavan'izy ireo ny zavatra manaitaitra, ny fahatsorana sandoka, ary indrindra fa izany faniriana te-hahafantatra ny zava-drehetra, hanangona ny fahalalana maro, ny siansa, hatramin'ny fitsipika tsy takatry ny saina ka mampirona azy ireny ho ao amin'ny taranjam-pikolokoloana endrika tsara izay tena fanambarana manohitra ankarihary ny fitsipika napetraky ny zavamisy sosialista.
Fotoana hanararaotana hanokafana ireo toerana sy sehatra, toerana fampiratiana sy ny tranom-bakoka ny Isandroataona, sy hanokafana ireo sehatra mahazatra ny besinimaro tahaka ny Halle Timco, tany lavavolo indostrialy, na ny CazarmaU tobi-miaramila efa nilaozana nandritra ny 20 taona mahery ary nosokafana noho ity fotoana ity.
Aingam-panahy avy amin'ny indran-tenin'i Constantin Brancusi (Brummer Gallery catalogue, New York, 1926) no antony nisafidianana ny lohahevitra: “Ny zavamisy, dia tsy ny endrika ivelany, fa ny foto-javatra. Miainga amin'izay fahamarinana izay, dia tsy misy olona afaka milaza ny zavamisy amin'ny fakana tahaka ny ivelan-javatra.” Ankoatra ny resaka ôriginaly sy ny nadika, tsy maintsy vakiana ihany koa ny fikarohana ny loharano, ny soritra izay mitohy sy maharitra mandraka androany.
Efa nolazainay fa nihetsiketsika ny vondrona “Sigma” tamin'ny taona 1970 tamin'ny alalan'ny fampivelarana fombam-panandramana sy mampifandray taranja maro. Ary taorian'ny revolisiona 1989, teraka tao Timisoara ihany koa fetiben'ny fanaovanjavatra mpitari-dalana, ny fetibe “Faritra-Eoropa Atsinanana” noforonina sy notarihan'i Ileana Pintilie ho fofonaina vaovao taorian'ny vanim-potoanan'ny didy jadon'i Nicolae Ceausescu.
Ny nisafidianana an'i Timisoara ankehitriny mba handray ity fihaonan'ny zavakanto ara-maso ity, dia ny hazmpifandray ny lasa manatantara sy ny hanolorana hoavy iray, hanolorana endrik'i Romania hafa amin'ny zava-kanto ankehitriny.
Mizara fanoroandalana efatra lehibe ny hetsika “Art Encounters” : ny programam-pampiratiana, programan-toerana ho an'ny tanora mpanakanto sy mpanatsonga, programam-pikaonandoha sy adihevitra miaraka amin'ireo manam-pahaizana ao amin'ny firenena sy iraisampirenena ary ny programam-panabeazana.
Tarihan'ny Ivontoerana Frantsay ao Timisoara ity singa farany ity. Fitaovam-pampianarana ahitana lalao sy boky.
Napetraka avokoa ny fepetra rehetra handaminana ireo fitsidihan'ny sekoly. Mametraka ny famandrihana ny ora fitsidihana amin'ny finday sy ny mailaka ny mpampianatra. Natokana ho azy ireo ny tranonkala iray www.artencounters.ro – . Nomena fiofanana momba ny fandinihana ara-kolontsaina ny andiana mpilatsaka an-tsitrapo (mpianatry ny lisea sy mpianatra hafa). Noforonina ny fitaovam-pampianarana mba hampiaina ny hetsika mandritra sy aorian'ny fampirantiana. Ahitana sary avy amin'ny fampirantiana (nozarazaraina teny ny folo) sy pasipaoro, natao toy ny kahie iasana araka ny sehatra samihafa: akanin-jaza, sekoly fanabeazana fototra, kolejy sy lisea. Mampitandahatra ny fitsidihana ny mpampianatra ary talanjona amin'ny zavakanto ankehitriny ny mpianatra. Ho an'ny ankamaroan'ny mpandray anjara, na ny kely na ny lehibe, sambany izy ireo nahita sanganasa, ary handeha hitsidika fampirantiana sy tranom-bakoka ry zareo. Ny hanentana azy ireo no tanjona , hanolotra fanabeazana ny vahoaka ankapobeny.
Ny “Art Encounters” amin'izay heviny izay dia sehatra tena izy ho fihaonan'ny mpanakanto, ny matihanina sy ny sarambabem-bahoaka. Laboratoara fanandramana ity hetsika ity: voalohany tao Romania amin'ny resaka hetsika zava-kanto maoderina amin'izany halehibeny sy ny kalitaony izany, ny hareny sy ny fahasamihafan'ny karazana zavakanto romainina ankehitriny, misokatra sy azon'ny vahoaka rehetra idirana.
Fanoitra hampitoetra an'i Timisoara amin'ny fandaharam-potoana ara-kolontsaina Eoropeana ny “Art encounters”. Aorian'ny tapa-bolana iasana, efa nahazo mpitsidika mihoatra ny 12.000 ny “Art encounters”. Amin'izany, efa nahomby ny fanamby!